लकडाउन मात्रै थप्ने कि समाधान पनि खोज्ने ? – Sunaulo Post
लकडाउन थपेको थप्यै गर्ने तर कोरोना जोखिम कम गर्न आवश्यक काम भने सुस्त गतिमा अघि बढाउने सरकारी शैलीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। लकडाउनको मोडालिटीबारेमै पुनःविचार हुनुपर्ने राय विज्ञहरुबाट आइरहेका बेला सरकारले बुधबार यही अवस्था अरु १० दिन लम्ब्याउने निर्णय लिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न बाक्लिएको छ के सरकार राजनीतिक विरोध छल्न लकडाउनको सहारा लिइरहेको छ ? उनीहरुको प्रश्नलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको प्रश्नले पनि बल दिन्छ।
मीनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसको कोठाभित्रै छात्रा बलात्कृत
टुटल र पठाओ सेवा सुरु